Sina: Mpi-tweet maromaro nanjavona talohan’ny 4 Jona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2010 8:12 GMT
Sinoa mpi-tweet maromaro no voasambotra sy voatana amponja hatramin'ny fiandohan'ny Jona tany – volana iray saro-pady noho ny fitsingerenan'ny datin'ny 4 Jona.
Araka ny voalazan'i @tengbiao, mafana fo iray mpiaro ny zon'olombelona mipetraka any Beijing, dia enina raha kely indrindra ny mpi-tweet voasambotra hatramin'ny 1 Jona 2010. Dia ry @suyutong, @jason5ng32, @wangyi09, @yanglicai, @wuyuren, @nwz8964 sy @gonewater
@suyutong, mpirotsaka antsitrapo iray avy amina ONG ao Beijing, izy dia nosamborina tao Tiananmen tamin'ny 10 ora maraina ny 4 Jona noho izy nitazona fehezan-draozy fotsy. Notanana nandritry ny ora vitsy tany amin'ny biraon'ny polisy izy. (loharanom-baovao CRD)
@jason5ng32, mpitoraka blaogy iray isan'ny be mpanaraka, nanangana ny tranonkala Kenengba. Nisy nisovoka ny kaonty tweeter fampiasany ny 3 Jona ary novaina ho @userhyq. Araka ny tweets marobe, dia natosika niditra tanaty fiarana polisy iray izy ary nanjavona nandritry ny ora roa teo ho eo tamin'ny 4 Jona. Ny vadiny @maoz niteny fa hoe salama tsara i Jason saingy tsy maintsy mipirimpirina kely mandra-paha… Ny fanomezam-baovao farany avy amin'i @mranti halina dia hoe efa nody an-trano i Jason saingy mila mitoetra irery mandritry ny andro vitsivitsy.
@wangyi09 tsy nampiasa tweet intsony efa hatramin'ny 31 May. Araka ny nambaran'i @mynamexu, naterina any Henan narahana mpiabina izy.
@nwz8964 dia gadra politika fahiny. Nosamborina izy tamin'ny 2009 ary nohelohina herintaona hanao asa fanarenana noho ny zavatra nosoratany momba ny fankalazana ny faha-20 taonan'ny 4 Jona tany anaty forum aterineto. Tsy nanome fanampim-baovao tamin'ny tweet-ny intsony izy hatramin'ny 31 May.
@yanglicai dia mpitoraka blaogy sady olon-tsotra mpanadihady. Tsy nanome fanampim-baovao tamin'ny tweet-ny intsony izy hatramin'ny 3 Jona ary raha ny nambaran'ny fanampim-baovao avy amin'i @xiuchangguato, dia nosamborina izy ary navotsotra ny 11 Jona.
@wuyuren, mpanakanto iray mafana fo ary nandray anjara tamin'ny hetsika fanehoan-kery nataon'ny mpanakanto hanoherana ny famotehana ny tananan'ny artista tao Beijing tamin'ny Febroary tamin'ity taona ity, no tsy nandefa nampiasa ny tweet-ny intsony hatramin'ny 30 May. Tsy misy intsony fanampim-baovao mombamomba azy.
@gonewater dia nosamborina ny alin'ny 3 Jona. Raha araka izay ambaran'i @mranti dia nentin'ny polisy ny solosainy, dika mitovin'ny fitanana an-tsoratr'i Li Peng ary t-shirt iray.
Mediam-bahoaka 11 ora izay